Umbuso Wamaselula e-US | Martech Zone
NgoLwesibili, ngo-Mashi 11, i-2014 NgoLwesihlanu, Mashi 14, 2014 Douglas Karr
Ukusetshenziswa kweselula phakathi kwabathengi kuyaqhubeka nokukhuphuka. I-74% yokukhula ibikuma-Smartphones anama-79% wabathengi base-US abaphequlula nabathenga kumasayithi nakuzinhlelo zokusebenza. Ngo-2016 imali engenayo yohlelo lokusebenza lweselula izofinyelela ku- $ 46 billion. Ukulinganisa ukuthi lokhu kushintshwa okumangazayo kusho ukuthini kwimikhiqizo abantu abakuyo I-Usablenet hlanganisa i-infographic ekhombisa ukuthi kungakanani ukusetshenziswa kwe-Intanethi okuhambayo okuguqula indlela abathengi abaxhumana ngayo nemikhiqizo kuwebhu.
I-Usablenet inika amandla amasayithi weselula nokuhlangenwe nakho kwe-multichannel kumakhasimende angaphezu kwama-400 kufaka phakathi abathengisi abaningi abahamba phambili emhlabeni, abahamba ngezokuvakasha kanye nezinsizakalo.
Tags: amazinga wokuguqulwaizitayela zokuthenga ngamaholideamaholideIzinhlelo zokusebenza zeselulayokuthengisa mobileiwebhu yeselulaamaholide okuthenga onlineukuthengiswa kwethebhulethiTabletsisikhathi esichithwe